France: Weerar lagu qaaday xarrun wargeys oo lagu dilay 12 ruux – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
France: Weerar lagu qaaday xarrun wargeys oo lagu dilay 12 ruux
A warsame 7 January 2015 7 January 2015
Mareeg.com: Rag wajiga soo duubtay, oo hubaysan, ayaa dalka Faransiiska ku dilay ugu yaraan 12 qof markii ay weerareen xarunta Wargays xilliyeed (Magazine) oo qaab maadaysi ah wax u qora, Charlie Hebdo.
Shan qof oo kale ayaa si xun ugu dhaawacmay. Wargayskan oo xaruntiisu ku taallo magaalada Paris ayaa koox Islaami ah horay u weerareen.
Ragga hubasayn oo aha 2, kuna hubeysan qoryo ayaa galay dhismaha saaka, waxaana ay bilaabeen in ay toogtaan dadka iyagoo isticmaalaya qoryaha fudud ee darandooriga u dhaca.
Wararka la helay ayaa sheegaya in ilaa konton xabadood la maqlay. Ragga weerarka soo qaaday ayaa kadibna baabuur ku baxsaday.
Howlgal ballaaran oo ay wadaan booliiska ayaa hadda socda oo la raadinaya kuwa weerarka qaaday. Caasimadda Faransiiska, ayaa dhacdadan awgeed heegan aad u sareeya la galiyay.
Bishii lasoo dhaafay ee December waxaa Faransiiska ka dhacay weeraro kala duwan oo ay qaadeen dad ku qeylinaya Allahu Akbar, waxaana labo ka mid ah weeraradaas loo adeegsaday gaari dad la jiirsiiyey.
Dowladda Soomaaliya oo u digtay shirkad Shiineys ah oo macdan ka baarta Somaliland